क्याथोलिक चर्च मरियमलाई को उचाइमा मामलामì
पोपको मरियम र बच्चा येशूको अघि मूर्ति धूप सर्छ।
प्रेरितहरूले र नयाँ नियममा मरियम वरिपरि विकसित कि शिक्षा को बाहिर छैन को शिक्षामा, त्यसपछि हामी unbiblical रूपमा नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सिद्धान्त स्वर्ग को रानी को मूर्तिपूजक उपासनाको यसको जरा छ
त्यसैले, यो एक unsound सिद्धान्त प्राप्त र स्पष्ट प्रकट गर्नुपर्छ छ। विभिन्न संस्कृति मा एक उपासना मार्फत र "स्वर्ग महारानी" को occultism मा इतिहास छ। सबैभन्दा टाढाको फिर्ता निम्रोदको पत्नी, Semiramis फिर्ता ठेगाना लगाया जान सक्छ। भइरहेको उनको छोरा ल्याए Tammuz, त्यो आकाश र धर्म माता दुवै रानी लागि भनिन्छ। (1 गन्ती 10।: 8-9)।
बस नाम "स्वर्गको रानी" क्याथोलिक चर्च, मरियमलाई दिइएको एउटा नाम छ। तपाईं त मरियम र एक जवान बच्चा सबै यी मूर्तिहरू देख्दा त निम्रोदको श्रीमती र छोरा तिनीहरूलाई प्रतिलिपि को छवि छ।
बच्चा gudamodern को विचार फरक संस्कृतिका मा बस्ने भएको छ। क्याथोलिक चर्च गर्न भक्ति स्थानान्तरण केही वैज्ञानिकहरू 300 शताब्दीका देखि descended र तिनीहरूले उनको छोरा बाजको टाउको संग Isis पूजा जहाँ मिश्रको जन्म भएको थियो विश्वास गर्दछन्। यो समानता हडताली छ। चित्र हेर्नुहोस्।
नयाँ विश्वकोश ब्रिटानिका, तपाईं निम्न तथ्यहरू लाग्न सक्छ: मसीही चर्च चर्च मा स्ट्रिम गरिएको जनता मा Constantine र अन्यजाति अन्तर्गत [रोमन] साम्राज्य चर्च हुँदा "परमेश्वरको आमा को उपासनालाई एक बढावा दिइएको थियो। ... तिनीहरूको piety र धार्मिक चेतना वर्ष हजारौं 'महान् आमा' र 'ईश्वरीय कुमारी', बेबिलोनिया र अश्शूरका पुरानो लोक धर्म बाट उत्पत्ति नेतृत्व एक विकास को उपासना द्वारा आकार गरिएको लागि थियो। "
जहाँ मूर्तिपूजक धर्म देखि descended आमा देवी को पंथ, कि छैन परमेश्वरको वचन हो, तर paganism हामी त देख्न सक्छौं। यो वास्तवमा मात्र एउटा आँखा-ओपनर हुनुपर्छ, र त्यो समाप्त अप मरियम को उपासनामा,
परमेश्वरले कहिल्यै आशिष् तिनीहरूले पुर्खाहरूले छन्, र जसलाई ख्रीष्ट सबै भन्दा जो एक मानव, रूपमा आएको छ ": क्याथोलिक Catechism मरियम सबै भन्दा छ भनेर भन्छन् तर बाइबल येशूले छ भनेर भन्छन्। आमिन। "रोम।59।
यो धेरै उल्लेखनीय छ र क्याथोलिक चर्च बाइबल विपरीत सिकाउने प्रकट - यो एउटा यो चर्च छोड्न पर्याप्त हुनुपर्छ। तपाईं कत्तिको त स्पष्ट छ के ढाकछोप गर्न प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ वा बाइबल के भन्छ के क्याथोलिक चर्च सिकाउँछ तुलना एउटा बाहिर अवलोकनकर्ताले गर्न स्पष्ट छ के देख्न सक्छौं गर्न, यो सिर्फ निरर्थक प्रयास हो।
यो लेखन को रूपमा इच्छा आलोचना छैन, यो आशा छ कि यो चर्च र अन्य मसीही आफ्नो आँखा खुला भइरहेको आबद्ध मानिसहरू। तपाईं क्षमा परमेश्वरको सोधेर, मरियमलाई प्रार्थना छ।
येशूले जवाफ दिनुभयो, "यो लेखिएको छ: प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं उपासना गर्नेछन् र उहाँलाई एक्लै तपाईं सेवा गर्नेछौं।" लूका। 4: आठौं
मरियमलाई प्रार्थना एउटा गैर-धर्मशास्त्रीय शिक्षा छ
हामी Catechism मरियम बारेमा भन्छन् सबै उर्तानु थियो, हामी यसको लागि ठूलो ठाउँ गर्न Resort गर्न हुनेछ। यो बिना हामी बाइबलमा यो दाबी लागि समर्थन पाउन भनेर, त्यसपछि हामी यो मनमा छैन गरेका हुन सकेन। हामी 1 कोरिन्थी मा कल हुन सट्टा आवश्यक छ। 4:6"तपाईं नियम सिक्न लागि यो धर्मशास्त्रमा भन्छ परे जान हामीलाई आउँदा।"
तपाईंले एक भेट्टाउनेछन् सिकाउन नयाँ Testaments जाने भने सबै मरियमलाई श्रेय छैनन्। हामी कुनै पनि फेला पार्न छैन प्रेरितहरूलाई सिकाउनुभयो कि मरियम क्याथोलिक चर्च गर्छ। किनभने तिनीहरूले धर्मशास्त्रमा मा स्थापित छैन त्यसैले हामी यी शिक्षाहरू स्वीकार्दैनन्।
शिक्षाहरू पहिलो शताब्दीयौंदेखि मा थिएनन्। तिनीहरूले निस्कनु सुरु रूपमा मात्र केही शताब्दीपछि पछि छ, 325 मा Nicaea को परिषद, त्यसपछि एफिससका 431 रूपान्तरणहरूलाई मानव मरियम परमेश्वरको आमा। त्यसपछि उनले förebedjerska फरक नाम, लगातार कुमारी, पापरहित, nådeförmedlerska र सह-redeemers हुन्छ।
क्याथोलिक चर्च मरियम को उचाइमा मामलामा धेरै लामो र यसैले पनि टाढा बाइबल उनको बारेमा भन्छ हो। क्याथोलिक Catechism को अनुच्छेद 969 यो भन्छन्: "अनुग्रहको क्रममा मरियम को यो प्रसूति त्यो Annunciation मा विश्वास दिनुभयो र जो त्यो पक्कै क्रूसमा गर्न clung सहमति संग थाले। त्यो स्वर्गमा गर्दा, त्यो आफ्नो redemptive मिशन बायाँ। सबै सदाको लागि सिद्ध विशेषताहरु सम्म यो अवरोध बिना जारी हुनेछ। यसको धेरै गुना अन्तर्विन्ती मार्फत त्यो सकिन र नाली व्यक्त गर्न मदत, त्यसैले अनमोल भर्जिन वकिल, Patroness रूपमा बोलाइएको छ अनन्त मुक्तिको उपहार .... हामीलाई frustrates। "
यो मरियमलाई श्रेय छ "आफ्नो redemptive मिशन।" यो बचत मिसन भएको छ जसले येशू, येशू मात्र छ। यो मरियम पनि छ क्याथोलिक भन्छन्। यो एड-मा परमेश्वरको वचन भन्छ छ।
परमेश्वरको स्पष्ट सन्देश यो तुलना: "न त त्यहाँ मुक्तिको छ, र आकाश मान्छे जो मार्फत हामी सुरक्षित हुनुपर्छ गरेको कुनै अन्य नाम हो।" प्रेरित 4:12।
"त्यसैले अनमोल भर्जिन बोलाइएको" येशूले कसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो: "अनि जो तपाईं पिता हुनुपर्छ भनेर, मेरो नाम म के हुनेछ मा सोध्न महिमा नै बिन्दु राम्रो धर्मशास्त्र तपाईं भन्न जब भन्न के परे हुन सक्छ पुत्र। "यूहन्ना मा। 14:13। हामी पालना गर्नुपर्छ जो येशूको निर्देशन, छैन क्याथोलिक चर्च गरेको catechism, प्रार्थना पछि जब हामी यो छ।
मरियम पापरहित जन्म भएको थियो पनि क्याथोलिक चर्च मा गरेको छ कि एक पूरक छ, बाइबल सबै मान्छे (रोमी। 3:23) पाप भन्छन्। यो एक dogma वर्ष 1854th रूपमा हालै रूपमा यसो छ
अझै पनि पछि, चर्च मरियम स्वर्ग, शरीर र प्राण मा अँगालेका कि आयोजित यो सबै संन्यासी 'दिन 1950 मा भयो शासन त पोप Pius XII, स्वर्ग मरियमको भर्ना मा क्याथोलिक चर्च शिक्षा। यो मरियमलाई सिर्जना निम्न पंथ संग भयो "भर्जिन प्रतिरोधी, शरीर र प्राण स्वर्गीय महिमा मा प्रवेश संग आफ्नो पार्थिव जीवन पाठ्यक्रम समाप्त भएको।"
हामी 1950 मा पोप गरेको घोषणा दर्शाउने कागजात र यो पूरक क्याथोलिक सिद्धान्त रूपमा स्थापित यो नयाँ सिद्धान्त पछि गरे कि कुनै बारेमा निम्न, "स्वेच्छाले हामी परिभाषित गरेको अस्वीकार वा शङ्का हिम्मत भने विशेष गरी उल्लेखनीय हो, उहाँले पूर्ण ईश्वरीय र क्याथोलिक विश्वास देखि खसेको भनेर भनिएको थियो। "
हो, यस खतरा छक्क र तपाईं त ईश्वरीय र क्याथोलिक विश्वास टाढा खसेको छ, यो सिद्धान्त स्थापित गरेपछि पोप आत्मा स्पष्ट यहाँ के छ। पहिले, कुनै ईश्वरीय विश्वास, यो परमेश्वरको वचन हुन फेला सक्दैन, छ त त्यसैले यो ईश्वरीय सिंहासन देखि खसेको यदि एक affirms यो सिद्धान्त, 1950. मा व्यवस्था एक देखि पतन हुनेछ त्यो गरेको छ, विपरीत बरु छ क्याथोलिक विश्वास सट्टा बाइबल हामीलाई के गर्न भनिएको छ जो absconds unbiblical धार्मिक शिक्षाले, बिना, एक स्वस्थ साइन revolted छैन रूपमा गर्न उल्लेख गर्नुपर्छ।
यो चर्च आफ्नो विश्वास गर्ने यी धम्की यो मानव सिक्ने स्वीकार गर्दैनौं गाह्रो हुनुपर्छ क्याथोलिक लागि। शायद यो तपाईँले यो विश्वास र यो चर्च रहन डराएका बनाउँछ, त्यसपछि राम्रो यो पोप कथन यो चर्च र unbiblical शिक्षा पनि थप मानिसहरूलाई बाँध्न आफ्नो अर्डर प्राप्त।
तपाईं एक क्याथोलिक, यो संग ब्रेक छन्, क्षमा सोध्न र येशू ख्रीष्टमा सुसमाचार delectable र स्वस्थ मुक्ति र स्वतन्त्रताको अनुभव।
क्याथोलिक चर्च मा मरियमको केन्द्र धेरै वास्तविक छ र धेरै खराब कुरा यो येशू, परमेश्वरको पुत्र, संसारको मुक्तिदाता छेक्दैन छ। मसीही चर्च स्वर्गको रानी, ​​र अन्य अतिरिक्त नाम बन्न, पेन्तिकोसमा थाले पछि मारिया एक ईश्वरीय मिशन संग एक साधारण मानिस परिवर्तन छ यसलाई बारेमा 400 वर्ष छ।
यो मरियम र बच्चा मूर्तिहरू को परम्परा क्याथोलिक चर्च मा प्रचारित छ कि पंथ देखि छ।
यो क्याथोलिक चर्च मा सदियों भन्दा देखा एक परम्परा छ। त्यसैले, यो मानव परम्परा लागि कुनै अधिकार छ। हाम्रो मसीही विश्वास धर्मशास्त्रको अख्तियार र प्रेषितहरूको शिक्षा र जो आफ्नो अभाव द्वारा मरियम को exaltation illuminates आधारित छ। तसर्थ, हामी निडर भई मरियमलाई बारेमा आफ्नो शिक्षा हामीलाई मुक्त गर्नु सक्नुहुन्छ।
क्याथोलिक चर्च यस क्षेत्रमा बाइबल शिक्षा देखि एक सानो विचलन संग थाले। यो शाखा को सीधा लाइन बाट बन्द हुन मूल टाढा टाढा हुनेछ कि एक लाइन तान्नु छ, लाइन थप आकर्षित भएको छ। त्यसैले यो क्याथोलिक चर्च मा मरियमले मा शिक्षा संग छ।
यो व्यक्तिगत क्याथोलिक निन्दा गर्न लेखिएको छैन। तपाईं क्याथोलिक चर्चका यस्तो परम्परा मा बढ्न, यो सिद्धान्त संग गलत गर्न blinded गर्न सजिलो छ। लिखित यो यो अस्वस्थ सिक्न र येशूले बचाउँछ गर्ने एक सम्पूर्ण निर्देशन अनुभव तोड्न क्याथोलिक लागि एक उपकरण रूपमा देख्न सकिन्छ, र यसरी हामी परमेश्वरको प्रार्थना गर्नुपर्छ।
यसलाई हामी क्याथोलिक चर्च एक जो मरियम को पंथ छ धेरै unbiblical शिक्षा, एक चर्च हो भनेर ध्यान दिनुहोस् कि दुःख छ। वास्तवमा, थुप्रै तरिकामा मरियम loftier आफ्नो छोरा, येशू भन्दा, यो बारेमा प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी गलत सबै भन्छन्।
यो सिर्फ दुनियावी सहिष्णु र शुद्ध दया हुन मारिया यस unsound दृष्टिकोण bypassed गरौं छैन। हामी बोलीको स्वतन्त्रता छ र हामी मरियमले बारेमा अस्वस्थ शिक्षाबाट टाढा प्राप्त गर्न मद्दत क्याथोलिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक पाठ्यक्रम यसरी के हामी यहाँ क्याथोलिक चर्च बारेमा लिखित छन् के गर्न पर्छ। एक वास्तवमा क्याथोलिक चर्च र यसको शिक्षाहरू प्रकट गर्न स्पष्ट विचार थियो भन्ने छ। त्यसैले स्पष्ट छ कि स्कूल छोराछोरीको शिक्षा भाग रूपमा सय बारेमा वर्ष पहिले लागि विद्यालयमा। हामी चर्चहरूले रूपरेखा बारे स्पष्ट हुन कति थप के क्याथोलिक चर्च त राज्य पाठ्यपुस्तकहरु यो विद्यालयमा शिक्षा भाग भन्ठानेको गर्दा लागि खडा गर्नुपर्छ।
हामी सी टी Odhner को fatherland को इतिहास मा पाठ्यपुस्तक उद्धृत हुनेछ। यो पाठयपुस्तक स्कूल छोराछोरीको शिक्षाका लागि धेरै दशकहरु को लागि प्रयोग भएको थियो। त्यसैले यो क्याथोलिक धार्मिक शिक्षाले र संस्थाहरू को सुधार अघि व्याप्त भएको थियो कि क्याथोलिक विश्वास यसो भन्छन्: "ख्रीष्टियन विश्वास धर्मशास्त्रमा त्यहाँ उत्पादन जस्तै कि हाम्रा पुर्खाहरूले गर्न शुद्ध मसीहीधर्म थिए प्रचार गरियो, तर क्याथोलिक सिद्धान्त। यो मानव आविष्कार संग मिश्रित बन्न समय दौरान थियो। तिनीहरूले पनि एक्लै Triune परमेश्वरको उपासना, तर, र सायद समेत थप, "परमेश्वरको आमा" (भर्जिन मरियम र सन्तहरूलाई। अर्थात् परमेश्वरको डर राख्ने उहाँको मृत्यु पवित्र रूपमा मानिन्छ र देवताहरूका रूपमा पूजा भइन् मान्छे। यो पनि रोम को पोप ख्रीष्टको थियो विश्वास छ पृथ्वीको र प्रभु को सारा चर्च को राज्यपाल, त्यसैले आफ्ना सबै आज्ञाहरू पालन, र उहाँलाई "पवित्र पिता" भनिन्छ। जो कोहीले उहाँलाई विरोध गर्न dared भने, उहाँले अर्थात् उपासना र sacraments को चर्च को संगति देखि बहिष्कृत, excommunication संग सजाय थियो। "अन्त उद्धरण Odhner।
यस लेखमा क्याथोलिक चर्च को महत्वपूर्ण छ भने, यो सही छ। वास्तव, को आलोचना एकदम इतिहास भर परमेश्वरको मानिसहरू छन् के तुलना मा थोरै छ। सबैले Wyckliff, Huss, लुथर, केल्विन, Melanchthon, नक्स, टिन्डेलको जस्ता ठूलो नाम, यूहन्ना र चार्ल्स Wesley को papacy प्रकाश मा वर्णन रूपमा ठूलो वेश्या छ जस्तो लाग्यो भनेर थाह छ, पढ्ने अध्याय 17 परमेश्वरले बताइएको वेश्याले को न्याय।
प्रोटेस्टेन्ट धेरै पनि स्वीकार्नाले यो समावेश चर्च। हाम्रो समय मा हामी यो कसरी बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी हामी व्यापक दुनियावी आन्दोलन खातिर क्याथोलिक संग सम्बन्ध मा जान सक्नुहुन्छ? यो समय हाम्रो predecessors थियो को स्पष्टता बुझ्न र पनि हाम्रो समझौता महसुस, अन्त-समय बर्बाद मा हाम्रो लागि हो।
हामी परमेश्वर र उहाँको वचन पालन गर्न भन्दा बढी मौन हुन र यसको unbiblical शिक्षा यो चर्च स्वीकार गर्न आवश्यक छ। हामी कसरी अरू हामी विश्वास परमेश्वरको वचनमा भन्न र यो चर्च मात्र हो कि अन्य सबै चर्च को एक विचार गर्न सक्नुहुन्छ?